Mpanamboatra sy mpamatsy Ethernet Media Converter | China Ethernet Media Converter Factory
1550nm Transmitter optika ivelany
1550nm Transmitter optique anatiny
Transmitter optika ivelany
Fibre optique optique
Hery mivoaka avo lenta EDFA
Amplifier herinaratra avo lenta miaraka amin'ny CWDM (EYDFA)
Modely EDFA manan-tsaina
Amplifier Optical Fibre ivelany
FTTH mpandray optika
FTTB mpandray optika
RFoG Optical mpandray
Node optika anatiny
Node optika ivelany
SAT-IF CATV Fampitana
Mpandefa optika satelita
PON Sy EOC
Fampitana tariby CATV coaxial
Amplifier Cable Coaxial ao anaty
Amplifier Cable Coaxial any ivelany
Peho Ary Splitter
Chassis feno vava
Module Transceiver an'ny SFP
Fitaovana sy fitaovana fitsapana
Masinina Fusion Splicer
Loharano Laser Optical
Fitsapana fatiantoka optika
Dinika optika napetraka
Attenuator miovaova optika
Metera haavo famantarana
Module fanonerana fanaparitahana (DCM)
Fitaovana optika fibre
FTTA CPRI ivelany fibre patch patch
Kitapo matevina optique
1Port FTTH Fibre Optical Box
2Port FTTH Fibre Optical Box
4Port FTTH Fibre Optical Box
Fampidirana fibre optika
Fitaovana fahitalavitra nomerika
Tariby optika fibre
1550nm Fanodinana ivelany ...
Mid-access Access EDFA (ZOA ...
ZHR1000SD FTTH Haavo avo O ...
1000Mbps Ethernet RJ45 mankany SFP Media Converter manova ny fibre 100BASE-FX amin'ny haino aman-jery varahina 100Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Endri-javatra • 1000Mbps Ethernet RJ45 mankany SFP Media Converter • Half o ...
100Mbps Ethernet RJ45 mankany SFP Media Converter manova ny fibre 100BASE-FX amin'ny haino aman-jery varahina 100Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Endri-javatra • 100Mbps Ethernet RJ45 mankany SFP Media Converter • antsasaky na ...
10 / 100M Fiber Media Converter manova ny fibre 100BASE-FX ho haino aman-jery varahina 100Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Endri-javatra • 1 Port 10 / 100M Media Converter, Single Mode Fiber Fiber • Half na ful ...
10 / 100M Fiber Media Converter manova ny fibre 100BASE-FX ho haino aman-jery varahina 100Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Endri-javatra • 1 Port 10 / 100M Media Converter, Single Mode Dual Fiber • antsasaky na feno ...
2 Seranana Ethernet mankany Fiber Media Converter ZJ-100102-25
10 / 100M Fiber Media Converter manova ny fibre 100BASE-FX ho haino aman-jery varahina 100Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Famaritana • 10 / 100M 2 Port Ethernet mankany amin'ny Fiber Media Converter • Antsasaky na feno d ...
10/100 / 1000M Fiber Media Converter nanova ny fibre 1000BASE-FX ho haino aman-jery varahina 1000Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Endri-javatra • 10/100 / 1000M Media Converter, Single Mode Fiber Fiber • Half o ...
10/100 / 1000M Fiber Media Converter nanova ny fibre 1000BASE-FX ho haino aman-jery varahina 1000Base-TX na ny mifamadika amin'izany. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny fampitana ny Media Converter hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny irery, na nitaingina chassis mpanova haino aman-jery 2U 14 miaraka amina famatsian-jiro afovoany. Endri-javatra • 10/100 / 1000M Media Converter, Single Mode Dual Fiber • antsasaky na ...
Ny 2U 16 Chassis Chassis dia afaka mandray fitambarana modely video 16 sy horonan-tsary / data. Ny famolavolana AC110 / 220V Switch Mode Power Supply (SMPS) dia ampiasaina hanamboarana module miasa tsy miankina tsy misy fanelingelenana avy amin'ny famonoana herinaratra iray sy ny tsy fahombiazan'ny modules hafa ao anaty chassis. Ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana avo lenta dia tratra. Endri-javatra • 2U 16 Slots Chassis ho an'ny Media Converter • Manangana ny famatsiana herinaratra roa, hanatsara ny fahamendrehan'ny ...
Ny chassis 2U 14 Slots dia mahazaka 14 set an'ny 10 / 100M na 10/100 / 1000M mpanova haino aman-jery irery. Ny famolavolana AC110 / 220V Switch Mode Power Supply (SMPS) dia ampiasaina hanamboarana module miasa tsy miankina tsy misy fanelingelenana avy amin'ny famonoana herinaratra iray sy ny tsy fahombiazan'ny modules hafa ao anaty chassis. Ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana avo lenta dia tratra. Endri-javatra • 2U 14 Slots Chassis ho an'ny Media Converter • Fandraisana ny famatsiana herinaratra roa, hanatsara ny fahamendrehan'ny fitoeran'entana ... Sup ...